प्रेमिकाको कुरालाई हतियार बनाएर सिध्याउन खोजियो! किन? – PathivaraOnline
Home > साहित्य > प्रेमिकाको कुरालाई हतियार बनाएर सिध्याउन खोजियो! किन?
प्रेमिकाको कुरालाई हतियार बनाएर सिध्याउन खोजियो! किन?
admin September 25, 2018 साहित्य 0
‘हामीले राज्यसत्तासँग अलग देश मागेका होइनौँ, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा समान हैसियत मागेका हौँ,’ मदन पुरस्कार विजेता लेखक राजन मुकारुङ भन्छन् । पछिल्लो एक वर्ष राजन मुकारुङ विवाद र आलोचनामै अल्झिए । १५औँ प्रेमिकाको लफडामा फसे । विवादमा आउने रहर नै थियो त राजन मुकारुङलाई ? एकछिन गम्भीर हुन्छन् । प्रकाशनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेको आफ्नो ‘अयोग्य’ उपन्यास हाे।
उनि अाफ्नो उपन्यासको पाण्डुलिपि ओल्टाइपल्टाइ गर्छन् । र, भन्छन्, ‘त्यो विषयमा म मौन बसिदिएँ । हाम्रो समाज हचुवाका भरमा बाहिरिएका कुरामा कतिसम्म भ्रमित हुन्छ भन्ने कुरा जान्नका लागि पनि थियो । एक वर्षसम्म मेरा शुभचिन्तकले ममाथि आएका प्रेमिकाको समाचार मात्र पढे ।’ उनले थपे, ‘संविधान जारी भयो । विवादबीच चुनाव भयो । म चुनावमा सहभागी भएँ । त्यतै अल्झिएँ ।’
राजन मुकारुङ त्यो समयमा दूरदराजका गाउँहरूमा पुगे । उनीहरूको जीवनस्तर, सामाजिक संरचनाको अध्ययन गरे, उनीहरू कस्तो सांस्कृतिक चेतनासँग जीवनयापन गरिरहेका छन् या कस्तो आर्थिक हैसियत बोकेर बाँचिरहेका छन् भन्ने कुराको खोजबिन गरे ।
‘त्यही समयमा शुभचिन्तक भेटिए । अनेक ढंगको सम्बन्ध बन्यो । ठाउँ-ठाउँमा बहस, विमर्श गर्दै हिँडेँ । तर, प्रेमिकाको सवाललाई भने केन्द्रमा राखियो,’ लामो सास तानेर टेबलबाट कुइनो हटाउँछन् र थप्छन्, ‘सबैले राजन मुकारुङलाई कसरी सिध्याउन सकिन्छ भनेर कमजोरी खोजिरहेका वेला प्रेमिकाको कुरालाई हतियार बनाएर सिध्याउन खोजियो ।’
राजन मुकारुङले दूरदराजमा पुग्दा बुझे, नेपालमा दुई खालका स्कुल छन् । एकथरी सहरका निजी स्कुल, जसले भौतिक सपना देखाइरहेका छन् । अर्को, सरकारी स्कुल जहाँ सपना नै देखाइँदैन । धनीहरूले आफ्ना बालबालिका निजी स्कुलमा पढाइरहेका छन् । नसक्नेहरू त्यतै, कतै सपनाभन्दा परको जीवन बाँचिरहेका छन् ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
आफूले जुन समुदायको उत्थानका लागि लेखियो, उनीहरू त सपनाविहीन भएर बाँच्दा रहेछन् भन्ने कुरा राजनले त्यतिखेरै बुझे । भन्छन्, ‘हामीसँग सपना नै छैन, सपना नभएकै कारण हामी पछाडि छौँ । हाम्रो सपना तलदेखि नै सिध्दिएर आएको छ । प्राथमिक तहमै हामीले उनीहरूलाई स्वप्निल बनाउनुपथ्र्यो ।’
उनको तर्क थियो, मानिसहरू निर्जीवजस्तो, कृत्रिमजस्तो भएर बाँचिरहेका छन् । अब त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी देख्छन्, राजन । उनको आक्रोश छ, ‘हामी राज्यसँग न्याय मागिरहेका हौँ । हाम्रो पनि अधिकार छ, हामीलाई पनि भूमिका देऊ भनेका हौँ । राज्य नै खोस्न खोजेका होइनौँ ।’ दमनमा बाँचिरहेको हरेकले कुनै दिन त अवश्य विद्रोह गर्छ नै । उनी सुझाउँदै भन्छन्, ‘राज्यले विद्रोह जन्मिने वातावरणको सिर्जना गर्नुहुँदैन ।’
आफ्नै बुहारीलाई लाजमर्दो हर्कत गर्ने पूर्व डिएसपीकाे अायो यस्तो दुःखद समाचार
मलेसियाबाट अायो गैरकानुनी नेपालीहरूका लागि पुन यस्तो दुःखद खबरः धमाधम समातिँदै